‘कमेडी च्याम्पियन’मा भोट गर्न सिक्किमका मुख्य मन्त्रीको ५ लाख सहयोग - नागरिक रैबार
‘कमेडी च्याम्पियन’मा भोट गर्न सिक्किमका मुख्य मन्त्रीको ५ लाख सहयोग
नेपालकै पहिलो कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को दोश्रो सिजन चलिरहेको छ । कान्तिपुर टीभीबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार प्रशारण हुँदै आएको यो शो टप ७ सम्म पुगेको छ । यो शोको उत्कृष्ट ७ मा पुगेका प्रतिस्पर्धीविच कडा प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको छ । प्रतिस्पर्धीहरुको भिडमा सिक्किमबाट आएका विक्की अग्रवाल पनि चर्चामा छन् । उनी, कार्यक्रमको अडिसन राउन्डबाट नै चर्चामा थिए ।
अहिले उनलाई जिताउनका लागि सिक्किममा अभियान नै चलेको छ । उनलाई सिक्किमका मुख्य मन्त्रीले समेत रकम सहयोग गरेका छन् । उनलाई प्रतियोगीतामा अगाडि बढाउनका लागि चाहिने भोटको व्यवस्था गर्नका लागि मुख्य मन्त्री पीएस गोलेले ५ लाख सहयोग गरेका हुन् ।
गोलेले विक्कीको परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गरेका छन् । सिक्किमको चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष पूजा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । मुख्यमन्त्रीको समेत सहयोग र हौसला पाएपछि विक्की र उनको परिवार उत्साहित देखिएको छ ।
‘कमेडी च्याम्पियन’मा प्रतिस्पर्धीहरुलाई अगाडि बढ्नका लागि दर्शकको भोटको आवश्यकता पर्दछ ।
एमाले–एमाले मुठभेडतिर ! सडकबाटै प्रतिकारको उद्घोष
धनगढीमा अत्याधुनिक रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालनमा
नेपाली फिल्म क्षेत्रको एक समयकी चर्चित अभिनेत्री गरिमा पन्त आमा बनेकी छन् । उनले छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । उनको छोरीको नाम प्रिषा राखिएको छ । आफु आमा बनेको उनले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएकी छन् । उनले श्रीमान्को साथ बच्चासँगै रहेको एक तस्बिर पोष्ट गर्दै सामाजिक संजालमा लेखेकी छन् ‘तिम्रो आगमनले हामी धन्य अनि […]
प्रतिष्ठानले गरेको बहिष्कारबारे के भन्छन् दुर्गेश थापा ?
गायक एवं मोडल दुर्गेश थापाले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आफूप्रति अन्याय गरेको बताएका छन् । उनले १० दिनअघि मात्रै ‘बिच्च बिच्चमा ४ – ख्यास्स पुतली’ बोलको तीज सार्वजनिक गरेका थिए । सो गीतमा समेटिएको शब्दहरुले तीज पर्व र महिलाहरुको अपमान गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको छ । शब्दहरु फेरबदल गर्नुपर्ने आग्रहसहित प्रतिष्ठानले भिडियो […]
सम्झिनी पानी छम्किनीको भ्यूजः ‘४ घन्टामा २० हजार, २ दिनमा ३५ लाख’
गत शनिबारको दिन तामझामका साथ कार्यक्रम गरेर रिलिज गरिएको गीत ‘संम्झिनी पानी छम्किनी’ले भ्यूजमा नयाँ रेकर्ड राखेको छ । यो गीत सार्वजनिक भएको ३ दिन पनि भएको छैन । तर, युटुबमा यो गीतलाई ३५ लाख ५० हजार पटक हेरिएको छ । सम्राट चौलागाँईको नाममा संचालित युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक यो गीतको भिडियो राम्रो छ । नायक […]
न्यूड’ भएर लाइभ आइन् अभिनेत्री गहना वशिष्ठ
अश्लिल भिडियो प्रकरणमा पक्राउ परेका भारतीय व्यवसायी राज कुन्द्रा प्रकरणसँग जोडिएर चर्चामा आएकी अभिनेत्री गहना वशिष्ट ‘न्यूड’ भएर इन्स्टाग्राममा लाइभ आएकी छन् । राज कुन्द्राले बनाएका फिल्म अश्लिल नभएको र ‘इरोटिका’ भएको भन्दै कुन्द्राको समर्थनमा उत्रिएकी गहनाले आफ्नो कुरा बुझाउनका लागि लाइभ आएकी बताएकी छन् । गहनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । गहनाले […]
दुर्गेशलाई बहिष्कार गर्ने दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको निर्णय
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालले गायक एवं मोडल दुर्गेश थापालाई संस्थागत बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाको आईतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्रतिष्ठानले निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रतिष्ठानका उप–महासचिव एवं विकृति विसंगती न्यूनिकरण विभाग समितिका संयोजक शिव हमालले वैठकले दुर्गेशलाई संस्थागत बहिस्कार गर्ने लगायतका केही निर्णय […]
बलात्कारको आरोपमा पप गायक क्रिश वु पक्राउ
चिनिया प्रहरीले चर्चित पप गायक क्रिश वुलाई बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । वुमाथि एक १९ बर्षिया एक विद्यार्थीले केही दिन अघि मात्र २ बर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । चिनियाँ–क्यानडेली यी लोकप्रिय गायकमाथि अन्य दुई दर्जन महिलाहरुले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । तर, गायक वुले सबै […]